faahfahin ka soo baxaya qaraxi maanta dhacay,Waxaa weli isa soo taraya faahfaahinta ku saabsan qaraxii weynaa ee maanta ka dhacay isgoyska Zoope ee magaalada Muqdisho kaasoo galaaftay nolosha dad badan, halka qaar kale oo ka sii badana ay isbitaalada caawa ugu hoyanayaan dhaawacyo kala duwan.
Masuuliyiin ka tirsan xukuumada Somalia ayaa ku naf waayey qaraxaas, waxaana ka mid ahaa Xoghayihii joogtada ahaa Wasaarada ganacsiga Abuukar Maxamed Daahiye oo gaari ku watay goobta uu qaraxu ka dhacay, halka xaaskiisa oo gaariga la saarneyd ay ku dhaawacantay.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan Baarlamanka Somalia ayaa isna la xaqiijiyey inuu soo gaaray dhaawac fudud, inkastoo uusan dhaawaciisa ku xusin fariin tacsi ah oo uu ku faafiyey baraha bulshada.
Oday dhaqameed magaciisa lagu sheegay nabadoon Baashi Nuur ayaa isna la xaqiijiyey inuu ku ka mid ahaa dadka ku naf waayey qaraxa, halka Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo ah afhayeenka beelaha Hawiye ay wararku sheegayaan inuu dhaawac fudud ka soo gaaray Daanka ama dhabanka.
Labo dhaqtar oo magacyadooda lagu soo kala gaabiyey Dr. Xiirey, Drs. Xaawo ayaa iyana la xaqiijiyey iney ka mid ahaayeen dadka ku naf waayey qaraxa maanta.
Meydad iyo dhaawacyo fara badan ayaa la sheegay iney weli ku hoos jiraan dhismayaasha burburay ee ku yaalla agagaarka Zoope kuwaasoo uu soo dumiyey qaraxii weynaa ee maanta halkaas ka dhacay oo illaa hadda aysan jirin cid sheegatay.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo booqday goobta uu qaraxu booqday ayaa ku baaqay gurmad deg deg ah in lala gaaro dadka ku waxyeeloobay, isagoo dalb